तेस्रो पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक – Peacepokhara.com
तेस्रो पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
पोखरा, १ जेठ,
पोखरामा यही जेठ १८ गते हुने तेस्रो टिभिएस अपाचे पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्ड २०७४ मा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डवाट खेल पूर्वाधारका अभियन्ता प्रा.डा. वीरेन्द्रसिंह गुरुङलाई सम्मान गरिने भएको छ ।
प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्व रहेर पनि पोखरामा खेलकुदका विकासमा उनको योगदानको कदर गर्दै मञ्चले सम्मान गर्न लागेको हो । उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्व प्रमुख हुन् ।
त्यसै गरि मंचले यस वर्ष मनोनयनमा पर्न सफल खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्डको सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुषमा कमलबहादुर भण्डारी (शारिरिक सुगठन), करण केसी (क्रिकेट) र तिलक पुन मगर (आर्चरी) मनोनयनमा परेका छन् । अवार्ड समारोहमा सर्वोत्कृष्ट छनोट गरी टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल, दोसल्ला सहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।
सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी महिलातर्फ बिमला नेपाली (सितेरियो कराँते), कमला पुन (हक्की) र केशरी आले मगर (आर्चरी) मनोनयमा परेका छन् । अवार्ड जित्नेले टिभिएस विगो स्कुटर, ट्रफी र दोसल्लाका साथ पुरस्कृत हुने मञ्च कास्कीले जनाएको छ ।
वर्ष उत्कृष्ट उदीयमान खेलाडीतर्फ विवेक अधिकारी (एथ्लेटिक्स), बुद्धिमाया मगर ‘कविता’ (कबड्डी) मेगबहादुर सेन (क्रिकेट) मनोनयनमा परेका छन् । यस्तै, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक बिधामा जीवन घिमिरे (शारीरिक सुगठन), रिजन प्रजु (क्रिकेट) र शिवबहादुर गुरुङ (फुल कन्ट्याक्ट कराँते) मनोनयनमा परेका छन् । यी दुइ विधामा अवार्ड प्राप्त गर्नेलाई नगद १५ हजार, ट्रफी र दोसल्ला प्रदान गरिने मञ्चले जनाएको छ ।
साथै, चारै विधामा उत्कृष्टलाई वल्र्डवाइड कनेक्सन चिप्लेढुंगाको तर्फबाट एक÷एक थान सामसुङ कम्पनीको मोबाइल समेत प्रदान गरिने मञ्च कास्कीका अध्यक्ष केशव पाठकले जानकारी दिए । मञ्चले यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट खेल संघ बिधामा कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन संघलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ । अवार्ड वितरण समारोहमा संघलाई नगद १० हजारसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।
खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले यस वर्षदेखि खेल पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कारको बिधा पनि थपेको छ । कास्कीमा रही कम्तिमा ५ वर्ष खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोडेर कलम चलाउँदै आएका एक जना पत्रकारलाई हरेक वर्ष नगद १५ हजारसहित दोषल्ला र ताम्रपत्रले पुरस्कृत गर्ने उद्धेश्यले यस वर्षदेखी यो विधा थपेको मञ्च कास्कीका सचिव रञ्जन अधिकारीले जनाए । सो अवसरमा खेलसम्बन्धी गीत गाएर योगदान दिएको भन्दै गायक बिनोद बानियाँलाईसमेत सम्मान गरिने भएको छ ।
राजनितिक सहमतिबाटै मधेस आन्दोलनको निकास : मन्त्री चौधरी
peacepokhara 04 Jan 2016
रेडियो बाराहीको आहा ! रारा बम्पर पुरस्कार घाचोकका बिष्णुलाई